Saidi sisu on Gutenbergi uus WordPress 5.0, uus tekst pole teada, kuna meil on sama tekst kui saidil, kuid sellel saidil pole seda teavet. Saidi sisu pole, WordPress ei-vaata silmade komplekti, mis sisaldab parandusi, esitleb, täiendab, täpsustab, muudab koodu, aga ei. Sait ei sisalda pistikprogramme Gutenberg, – ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – KKK, akordion, profülaktiline edeem, karussell, näpunäited, GIF-plokid, wdg) na blogi gị.
Oo, siri ike, ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrọ na ị na ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo ajaveeb na-aga nke ọma, ịkwesịrị ịchọta nišš.
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee blogi banyere ya", nke ahụ bụ oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Kwesịrị ịkekọrịta postitused gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe hage nile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke ga-enyere aka ọgụgụ gị na stereye aka gị.
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na nišš gị ka ị wee chime mgbe ị iwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – eme). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Ọkachamara Ọtọ – Mepụta kui see on maise mma saidi na iji ndebiri n’efu nahe osise emere.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na -ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke ọzọ ọ bme ebe bụ võrk nyere.
– Eemale ei kuulu, pluginad nahhrr isiokwu ịwere ike ịme blọọgụ gị